ဘာတစ်ခုမှ အကူအညီမရပဲ မိသားစုကိုလာ ဆဲဆိုနေကြသူတွေ ကိုဒဲ့ပြောလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ မေချစ်သွေး – Shwe Likes
ဘာတစ်ခုမှ အကူအညီမရပဲ မိသားစုကိုလာ ဆဲဆိုနေကြသူတွေ ကိုဒဲ့ပြောလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ မေချစ်သွေး
Shwe | December 28, 2021 | Celebrity | No Comments
သရုပ်ေ ဆာင်နဲ့ မော်ဒယ်လ် ပိုင်တံခွ န်ကတော့ (၅၀၅) ကနဲ့ စကစရဲ့ ဖမ်း ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး မနေ့က ဒီဇင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ ့မှာတော့ အလုပ်ကြ မ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် (၃) နှစ်ချမှ တ်ခံခဲ့ရ ပြီပဲဖြစ် ပါတယ်။
အဆို ပါသတင်းအတွ က် ပိုင်တံခွန်ကို ပရိသတ်တွေက စိုးရိမ်နေကြပြီး ကရုဏာဒေါ သနဲ့ သူ့ရဲ့မိသား စုကို ပြစ်တင်ပြော ဆိုတာတွေ ရှိခဲ့တာမို့ ပိုင်တံ ခွန်ရဲ့အစ် မဖြစ်သူ မေချစ်သွေးက အခုလိုပဲပြောလာပါတယ်။
“အကြောင်း အရာ ဘာမှမသိပဲ အာချောင်ကြ သူတွေကို ငါသည်း ခံသင့်သလောက် သည်းခံပေး ခဲ့ပြီးပြီနော်။ ေ-ာက်ကြောင်း မသိရင် ေ-ာက်အာ မချောင်ပဲ ေ-ာက်ပေါက်ပိတ်ေ နကြ နောက်မှ ငါ့အဆိုး မဆိုနဲ့လိုင်းပေါ်ကနေ ဝမ်းနည်းေြ ကာင်းကလွဲလို့ နင်တို့ ဘာများလု ပ်ပေးခဲ့ဖူးလဲ? သူ့အတွက် ထမင်း၊ဟင်း ချက်ပို့ပေးခဲ့ဖူး သလား? အဝ တ်အစား၊ဆေး အစရှိသဖြင့် ဘာတွေများ အဆင်ပြေအောင် ပို့ဆောင်ပေး ခဲ့ဖူးသလဲေ-ာက်ပိုတွေပဲ ရေးနေ ပြောနေပြီး မိသားစုထ က်တောင် ပိုပြီးပူဆွေးနေရသေးသတဲ့”
“အကောင့်ေ တွဝင်ကြ ည့်လိုက်ရင် lock တွေချပြီး ဝရမ်းပြေး လိုလို နိုင်ငံအတွက် တအား ကို အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့အထာတွေနဲ့ ေ-ာက်ဦးနှော က်တွေက အဝီစိ ကနေကို တက်မ လာကြဘူး။ ဘယ်သူ့မှ စောက်ဂရုမစိုက် လို့ကို အေးဆေးနေနေတာ လာမထိကြနဲ့ နောက် တစ်ခါ ss တွေနဲ့ပါ ချပြောမယ်🖕🏻 ဘာမှမသိပဲ မိသားစု ဝင်တွေကို လာဆဲနေကြ တဲ့သူတွေကို ပြောတာပါ.. တခြားသူေ တွကိုတော့ ကန်တော့ပါဗျ🙏” ဆိုပြီး ပေါက်ကွဲလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်တံခွန်ရဲ့ မိသားစုဟာ ပိုင်တံခွန်အ တွက် အကောင်းဆုံးဆို တဲ့အရာေ တွကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး အခုလို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ်ချမှ တ်ခံရချိန်မှာ လည်း ပူဆွေးသော ကရောက်နေကြ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Source: May Chit Thway’s fb
သ႐ုပ္ေ ဆာင္နဲ႔ ေမာ္ဒယ္လ္ ပိုင္တံခြ န္ကေတာ့ (၅၀၅) ကနဲ႔ စကစရဲ့ ဖမ္း ဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး မေန႔က ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန ့မွာေတာ့ အလုပ္ၾက မ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္ခ်မွ တ္ခံခဲ့ရ ၿပီပဲျဖစ္ ပါတယ္။
အဆို ပါသတင္းအတြ က္ ပိုင္တံခြန္ကို ပရိသတ္ေတြက စိုးရိမ္ေနၾကၿပီး က႐ုဏာေဒါ သနဲ႔ သူ႔ရဲ့မိသား စုကို ျပစ္တင္ေျပာ ဆိုတာေတြ ရွိခဲ့တာမို႔ ပိုင္တံ ခြန္ရဲ့အစ္ မျဖစ္သူ ေမခ်စ္ေသြးက အခုလိုပဲေျပာလာပါတယ္။
“အေၾကာင္း အရာ ဘာမွမသိပဲ အာေခ်ာင္ၾက သူေတြကို ငါသည္း ခံသင့္သေလာက္ သည္းခံေပး ခဲ့ၿပီးၿပီေနာ္။ ေ-ာက္ေၾကာင္း မသိရင္ ေ-ာက္အာ မေခ်ာင္ပဲ ေ-ာက္ေပါက္ပိတ္ေ နၾက ေနာက္မွ ငါ့အဆိုး မဆိုနဲ႔လိုင္းေပၚကေန ဝမ္းနည္းေျ ကာင္းကလြဲလို႔ နင္တို႔ ဘာမ်ားလု ပ္ေပးခဲ့ဖူးလဲ? သူ႔အတြက္ ထမင္း၊ဟင္း ခ်က္ပို႔ေပးခဲ့ဖူး သလား? အဝ တ္အစား၊ေဆး အစရွိသျဖင့္ ဘာေတြမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပး ခဲ့ဖူးသလဲေ-ာက္ပိုေတြပဲ ေရးေန ေျပာေနၿပီး မိသားစုထ က္ေတာင္ ပိုၿပီးပူေဆြးေနရေသးသတဲ့”
“အေကာင့္ေ တြဝင္ၾက ည့္လိုက္ရင္ lock ေတြခ်ၿပီး ဝရမ္းေျပး လိုလို နိုင္ငံအတြက္ တအား ကို အလုပ္လုပ္ေပးေနတဲ့အထာေတြနဲ႔ ေ-ာက္ဦးေႏွာ က္ေတြက အဝီစိ ကေနကို တက္မ လာၾကဘူး။ ဘယ္သူ႔မွ ေစာက္ဂ႐ုမစိုက္ လို႔ကို ေအးေဆးေနေနတာ လာမထိၾကနဲ႔ ေနာက္ တစ္ခါ ss ေတြနဲ႔ပါ ခ်ေျပာမယ္🖕🏻 ဘာမွမသိပဲ မိသားစု ဝင္ေတြကို လာဆဲေနၾက တဲ့သူေတြကို ေျပာတာပါ.. တျခားသူေ တြကိုေတာ့ ကန္ေတာ့ပါဗ်🙏” ဆိုၿပီး ေပါက္ကြဲလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပိုင္တံခြန္ရဲ့ မိသားစုဟာ ပိုင္တံခြန္အ တြက္ အေကာင္းဆုံးဆို တဲ့အရာေ တြကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး အခုလို အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွ တ္ခံရခ်ိန္မွာ လည္း ပူေဆြးေသာ ကေရာက္ေနၾက တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Source: May Chit Thway’s fb
တွေ့ချင်လွန်းလို့ တကူးတကစောင့်မျှော်နေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို လက်အုပ်လေးချီပြီး တရိုတသနှေုတ်ဆက်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်
အချိန်မရွေးပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါကြောင့် စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြောပြလာတဲ့ တေးသံရှင်အိအိချွန်
ခမ်းနားလှတဲ့ မင်္ဂလာခန်းမကြီးထဲကို သီချင်းလေး သီဆိုရင်း ကြည်နူးစွာလျှောက်လှမ်းလာတဲ့ သတို့သမီးချောလေး ယွန်းမြတ်သူရဲ့ဗီဒီိယို